Home » Life » CILMIGA BULSHADA PDF
Author: Arashibar Kazir
Mar bjlshada ka hadlay cilmiga cusub ee uu dunida ku soo kordhay ee cilmiga bulshada ah. Hannaanka ama wareega ay maraan labadooda. Cilmiga bulshada waxaa loo aqoonsan yahay inuu ka mid yahay culuumtii ugu horreeysay ee aadanuhu uu baaro, waa cilmi daraaseeya aragtida kala duwan iyo xiriirka qofka kala dhaxeeya bulshada iyo deegaankiisa.
Cilmibaare walba oo doonaya in uu qaado waddada maantus baarineedka waa ku waajib in uu cilimga qodobada hoose:. Enter your Email address. Waxa xiga kuray iyo foodlay oo dumarka lagu tiraabo.
Cilmiga bulshada waxaa saameyn ku yeeshay, sida ku dhacay culuum farabadan, kacdoonkii dhanka warshadaha, waxaa batay muhiimadda la siinayo cilmigan iyo goobaha uu taabanayo oo aad u tiro bateen ayaa waxaa dhacday in dhinacyo kala duwan uu u bulshadz, waxaana faracyadiisa ka mid ah:.
Haddaba, Cilmiag Khaldun oo dhintay muddo hore oo noolaa qarnigii 14aad ee Miilaadiga. Felsafadda Cilmibaarista Casharkii saddexaad waxa aynu ku soo baranay xeerarkii laga dejiyey ilaalinta xogta iyo macluumaadka cilmibaarista.
Adeegsiga hababka cilmiga ku dhisan ayey laamahani kaga duwanaadeen kuwa kale ee ku saabsan dadka. Maantus baarineedka iyo dareentus baarineedka, labaduba waxay ku colmiga labadaas heer baarineed. Dhinaca kale, haddii la yidhaahdo indheer-garad ayaad tahay, maan-dheeri ayaa Alle kugu mannaystay ugu danbayn waxa laga fishaaba waa sida lagu tilmaamay.
Waxaad dhaqso u ogaanaysaa bylshada mawduuc kastaa u qaybsamayo mawduuc hoosaadyo yaryar. Casharkan waxa aynu ku baran doonaa felsafadda baarista gaar ahaan labada iskuul feker, ee saldhiga u ah baaris cilmiyeed walba. Ibnu Khaldun wuxuu ku soo koobay cilmigan: Eeg Shuruudaha adeegsiga ee faahfaahinta. Magaca Ibnu Khaldun waa mid bari iyo bulehada ba ka dhacay.
Akhri qoraalka, eeg sawirrada oo samee laylisyada ku yaal halka bogga u hooseeysa. Waana buugga cilmiga ugu badan ee sociology ga laga bartay.
Cilmibaaraha adeegsada maantus baarineedka, waxaan ku matali lahaa sida qof saaran buur dheer dusheeda, kaddibna hoos u soo daadagaya. Uruurinta xog ama macluumaad adiga oo uu maraya daawasho Observation.
Maantus Baarineed iyo Dareentus Baarineed Casharkii lixaad waxa aynu ku baranay iskuul fekerka tarjumidda Interpretivism. Gorfaynta iyo tarjumidda xogta ama macluumaadka. Cilmibaaraha xariifka ahi, waa kan adeegsada labadooda, kaddib soosaara aqoon cusub, beeniya ama rumeeya aragti bklshada.
Tusaale ahaan, haddii uu macalinku ama waalidku ilmaha yar ku celceliyaan saaqid ayaad tahay, waxa uu kolka danbe dhab u noqonayaa saaqid, haddii la yidhaahdo tuug baad tahay, kolka danbe cilmia ayaa uu ku kacayaa. Labadaas hab baarineed waxay kala yihiin: Markaad dhammaysid hal mawduuc, u gudub midka xiga. Qaar badan oo laylisyada ka mid ah waxay ku xiran yihiin waxa halkan ku yaal, markaa waxa halkan ku qoran aad bay muhiim u tahay.
Taa caksigeeda ccilmiga baarineedka waxay la mid tahay qof jooga buurta hoosteeda, kaddibna raba in uu fuulo buurta dusheeda sare. Bulshadu waa noole dharaaraha uu adduunka joogo la kulma dhalasho, koritaan, qaan-gaadh, gabaw iyo dhimasho yadoo ay ugu wacantahay sida ay sunnada Rabi ku dureersantay. Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay Waa mid ka mid ah mufakiriintii ugu waaweynayd ee dalka Ingiriiska, waxa uu saameyn ballaaran lahaa dhamaadkii qarnigii 19aad, waxaana loo aqoonsan yahay inuu yahay aabihii labaad ee cilmigan bulshada, kadib Auguste Comte.
Waxa la daabacayAustin, Texas, boggaga uu ka kooban yahay waa bog.
Felsafadda ka dambeysa maantus baarineedka waa mid ku dulwareeganaysa rumaysashada in maanku yahay ilaha aqoonta saxda ah. Tan hore waa maaddo ka mida felsafadda, taas oo falanqaysa gundhiga jiritaanka shayga, dhacdada ama waxa markaasi saaran masraxa dood akademiyeedka.
Sida ku xusan buug aanu helnay oo laga qoray Ibnu Khadun iyo Aragtiyadiisii uu soo kordhiyay. Wixii dheeraad ah, akhri buuggaagta hoose: Si kale u dhig, hoos ka soo bilow, kor u soco. Xilligii Yurub wejihaysay kacdoonkii liddiga ku ahaa is dhexgelka kaniisadda iyo qaranka ama is-garab socodka diinta iyo dowladnimada, waxaa masraxa akademiga ka soo muuqday ol-ole looga soo horjeeday doorka ay diinta ka ciyaari karto cilmiga sayniska iyo felsafadda.
In other projects Wikimedia Commons. Casharkii lixaad waxa aynu ku baranay iskuul fekerka tarjumidda Interpretivism. Waa caalim Falasuuf ah oo u dhashay dalka Faransiiska, waa caalimkii bixiya magaca cilmiga Bulshada ee maanta loo yaqaanno.
Previous post: [ ECUACIONES DIOFANTICAS PDF ]
Next post: [ DYNACORD F150 PDF ]